Somaliland: Qalalaasaha Diblomaasiyadeed ee Qatar iyo Carabta kale: Maxaad kala socotaa? (WQ: Cabdirashiid Jeeni} | BuhodlePost.com
Shalay 5-tii June, 2017 waxa dhacay dhacdo diblomaasiyadeed oo taariikhi ah, dalal badan ayaa xidhiidhka diblomaasiyadeed u jaray dalka Qatar. Waddamadaas waxa ka mid ah Sucuudiga, Baxrayn, Masar, UAE, Liibiya, Maldives iyo Yaman. Dalalkani waxay Qatar ku eedeeyeen in ay taageertay kooxaha mayalka adag ee loo yaqaan argagixisada, in ay fara-gelin ku samaysey arrimaha gudaha ee dalalkooda iyo in ay si dhow ula xidhiidhay dawladda Iran.
Dawladda Sucuudigu waxay dalka Iran u aragtaa khatar ka dhan ah danaha Sucuudiga iyo xulafadiisa ee dhinac kasta oo ay ku jiraan: ammaanka dawladaha carbeed, saamaynta gobolka iyo sarraynta Mad’habta Sunniga. Labada dawladood (Iran iyo Sucuudiga) waxa dhexdooda yaal khilaaf taariikhi iyo diiniba ah oo dhinacyo badan, iyada oo labada dal mid kastii taageero u fidiyo kooxaha la fekerka ah, dagaaladaasi waa kuwo ka socoda gobolka intiisabadan, sida: Syria, Yemen, Lebanon iyo Ciraaq. khilaafkan ayaa marmarka qaar lagu tilmaamaa ‘Dagaalkii qaboobaa ee bariga dhexe’, wuxuna leeyahay saamayn dhaqaale, juquraafiyadeed iyo mid mad’habeed.
Qatar oo ah dal yar oo oo qani ah oo Sunni ah, waa dal aad ugu dedaala in uu yeesho madaxbannaani siyaasad-dibedeed, waxayna xoogga saartaa in ay danta dalkooda ka horeysiiyaan wax kasta oo kale. Waxay isu-qabaan in ay leeyihiin awood ay ku saamayn karaan gobolka Bariga Dhexe iyo adduunkaba. Waxay ku dedaalaan siyaasad furfuran oo ku-dhac leh. waxa ay xuduud la wadaagaan Sucuudiga, waxayna ka mid yihiin ururka GCC ee ay ku midaysan yihiin Waddammada Gacanka Carabtu. Dalka Qatar waxay maal-gelisaa Televisionka Aljazeera oo ah mid ka mida kuwa ugu daawashada iyo saamaynta badan adduunka.
– Sidoo kale la joojiyey dhammaan doonyaha iyo maraakiibta sita calanka Qatar in ay ku soo xidhaah dekedaha Sucuudiga iyo Imaaraadka iyadoo la filayo in dhowaan kuwa kalena joojiyaan.
Iran waxay ku dooday in waxa aynu daawanaynaa tahay “qaybtii ugu horeysey ee maxsuulka Jaaskii Seefaha” Wasiirka Arrimaha Dibedda Javad Zarif waxa uu Twitterkiisa ku qoray “Derisku waa wax aan guureyn, Juquraafiguna waa wax aan la bedeli karin; Sidaa awgeed, Khasabku xal ma aha ee wada-hadalka ayaa dhaama, weliba xiligan Ramadaanta ah ee barakaysan”. Dhanka kale, Iran oo u muuqata in ay aragto fursad saaxiibtinimo oo ay ugu weyntahay mid ganacsi iyo iyada oo isla markaana xaradhaaminaysa quluubta Qatariyiinta, kana shaqeysiineysa fekreddii ahayd “haddaad dooneyso in aan qof ku illaabin is barbar-taag xiliga dhibka” ayaa arrinkan ka fal-celisay; Guddoomiyaha is-kaashatada beeraleyda wax dhoofisa Mudane Reza Nourani ayaa yidhi “Shixnadda ugu horeysa ee cunto ah waxanu Qatar ku gaadhsiin karnaa 12 saacadood”.